Ankoatra ny zandary any Toamasina dia manao famotorana manokana ihany koa ny fianakavian’ny maty. Milaza izy ireo fa mizotra tsara ny famotorana ary hivoaka tsy ho ela ny valiny.
Araka ny loharanom-baovao dia misy ny anaran’olona ambony voatonona amin’ity raharaha ity. « Nisy mihitsy ny fanomezam-baovao avy amin’olona tsy mitonona anarana nomena ny Zandarimariam-pirenena. Maniry ny amin’ny tokony hanaovana famotorana akaiky io olona ambony io ilay fanomezam-baovao », hoy ny loharanom-baovao.
« Ny azoko lazaina dia hivoaka tsy ho ela ny valin’ny famotorana mikasika iny zava-doza iny », hoy kosa i Alain Ramaroson, dadatoan’ny maty.
Ankoatra izay dia misy ihany koa ny famotorana ataon’ny komity manokana najoro hanadihady ny amin’ny lafiny fifamoivoizana an-dranomasina. « Raha ela indrindra dia ao anatin’ny iray volana izahay no hamoaka ny valin’ny fanadihadiana nataonay rehetra mikasika iny loza iny. Ny lesoka teo amin’ny fifamoivoizana an-dranomasina ka nahatonga iny loza iny no nohadihadianay tamin’izany », hoy Rasolofonirina Rolland, talen’ny « opérations maritimes » eo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana.